Laba doon oo ku degay xeebaha dalka Yemen - BBC News Somali
Laba doon oo ku degay xeebaha dalka Yemen
Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Yemen, ayaa sheegtay in ilaa 80 qof oo african ah laga cabsi qabo in ay doomihii ay saarnaayeen ay ku dageen xeebaha dalka Yemen, iyagoo isku dayaya in ay dalkaas doonyo ku galaan.
Wasaaradda ayaa sheegtay in dadkaas ay ka cabsi qabto in ay dhinteen.
Waxaa warkan qoray wakaaladda wararka dalka Yemen ee SABA.
Laba doomood ayaa siyaabo kala duwan ugu degan xeebaha dalka Yemen.
Mid ka mid ah waxaa saarnaa ilaa 45 qof oo intooda badan ahaa Ethiopian, waxaana ay ku degtay biyaha Ba Al-Mandab ee badda cas.
Sadex qof oo kaliya ayaa wararku sheegayaan in la rumaysan yahay in ay Soomaali ka ahaayeen, kuwaas oo iyagoo nool la helay kadib markii ay xeebta Yemen soo gaareen, ayay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha Yemen.
Ilaalada xeebaha dalkaas ayaa helay maydka laba qof oo kale iyadoo intii kale la la'yahay lagana cabsi qabo in ay dhinteen iyadoo ilaa hadda aan war laga hayn xaaladda ay ku sugan yihiin.
Doonta kale ayaa la qiyaasayaa in ay saarnaayeen 35 ilaa 40 qof oo soo galooti African ah oo ay ku jiraan dumar iyo caruur. Waxaa doontan ay ku degtay xeebta Ras Al-Arah ee Lahj, iyadoo wasaaraddu sheegtay in dhamaan kooxda doonta saarnayd aan la ogayn waxa ay ku sugan yihiin.
Wakaaladda wararka Yemen oo soo xiganaysa wasaaradda arrimaha gudaha ayaa intaas ku dartay in howlgal ballaaran oo gurmad ah la bilaabay inkastoo rajada laga qabo in la helo dad badbaaday ay sii yaraanayso.
Shilalka noocan ah, ayaa badanaa dhacay inta ay dadka soo galootiga ah ku jiraan qorshe ay si qarsoodi ah dhinaca badda uga soo galayaan dalka Yemen, dadaalkaas oo maalinle lagu tilmaamay.
Dadkan ayay wakaaladdu sheegtay in ay u badan yihiin dad ka soo cararaya xaalado ka jira geeska Africa siiba dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia si ay u galaan Yemen.
Inta ay ku sii jeedaan Yemen, ayaa muhaajiriintu waxay u soo bareereen dhimasho cad oo ay og yihiin in ay dhici karto inta ay ku jiraan safarkooda badda qatarta ah ay ku soo galayaan. Qaar badan oo ka mid ah ayaa dhinta marka ay doomaha ay saaran yihiin ay degaan, si la mid ah labada doomood ee hadda degtay ama mararka ay kooxaha dadka soo daabula ee doomaha leh ay ku qasbaan rakaabka in ay badda ku daataan oo ay dabaal ku gaaraan Yemen.